Dalka Kenya oo Siddi laga baqaayey Qulqulatooyin ka Bilowdeen – Xeernews24
Dalka Kenya oo Siddi laga baqaayey Qulqulatooyin ka Bilowdeen
9. August 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Rabshado dhexmaraya booliska iyo taageerayaasha mucaaradka ayaa ka bilowday qeybo ka mid ah dalka Kenya xili ay weli socoto tirinta codadka doorashadii shalay ka dhacday wadankaas.
Rabshadaha ayaa bilowday saaka markii ay soo baxeen natiijooyinka hordhaca ah ee codadka la tiriyey oo sheegaya inuu ku horeeyo Madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu arintaas ku gacan saydhay.
Sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah Mr Kenyatta ayaa ilaa iyo imika haysta 7863983 cod oo u dhiganta boqolkiiba 54.35.
Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ilaa iyo imika codadka la tiriyay waxa uu helay 6479553 cod oo u dhiganta boqolkiiba 44.78.
Dibad baxyo rabshado watay ayaa ka dhacay xaafada Mathare ee magaalada Nairobi.
Mathare waxay ka mid tahay meelaaha ay ku xoogan yihiin taageerayasha mucaaradka, waana mid ka mid ah xaafadaha isku raranka ee Nairobi balse Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa kala caydhiyay dibad baxayaashaasi.
Dhinaca kale Booliiska iyo taageerayaasha mucaaradka ayaa isku hortaagan magaalada Kisumu, iyadoo Kisumu ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, Dadka isu soo baxay ayaa waxa ay wadooyinka ku gubeen taayirro.
Guddiga doorashada Kenya ayaa ugu baaqay shacabka Kenyanka in ay nabadda ku dadaalaan ka dib markii mucaaradka ay diideen natiijada oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah.
Wasiirka amniga gudaha Kenya Fred Matiangi ayaa ugu baaqay shacabka Kenyanka in ay howlahooda caadiga ah sii wataan, isagoo ballan qaaday inuu ammaankooda sugi doono.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/fv_6.jpg 853 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-09 18:14:022017-08-09 18:14:02Dalka Kenya oo Siddi laga baqaayey Qulqulatooyin ka Bilowdeen
Dalalka Imaaraadka iyo Baxreyn oo Xayiraadii Dhanka cirka ka qaaday Qatar Qadar oo 80 Dal u fasaxday inay Visa la’aan ku tegi karaan dalkeeda (Akhriso...